BALOSB, Yalnızca Balıkesir’i Değil Bölgeyi De Kalkındıracak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirBALOSB သည် Balikkesir သာမကဒေသကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်
BALOSB သည် Balikkesir သာမကဒေသကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 10 Balikesir, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Balıkesirဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန်သည် Common Mind အစည်းအဝေးများ၏ 21 မှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကို Turkishtime နှင့် Halkbank တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ŞerefOğuzကသုံးသပ်ခဲ့သည်။ 1977 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး BALOSB သည်ဒေသ၏စီးပွားရေးတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်။ စုစုပေါင်း 110 စက်ရုံများနှင့် 13 ၀ န်ထမ်းများအပါအ ၀ င်လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုတွင်ရှိနေသော 123 စက်ရုံနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်တွင်ရှိနေသော9စက်ရုံ။
စနစ်တကျစက်မှုဇုန်များတွင် Turkishtime နှင့် Halkbank တို့ကစီစဉ်သောပူးတွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများ၏ 21 ကို Balikkesir ဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန် (BALOSB) တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ သတင်းစာဆရာŞerefOğuzမှတည်းဖြတ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် BALOSB နှင့်Balıkesirမှစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ ပြproblemsနာများနှင့်အစီအမံများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
The Common Mind အစည်းအဝေး၊ ŞerefOğuz (Turkishtime Meeting Moderator)၊ Mehmet Volkan Sayım Halkbank အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး 1 ဦး စီးဌာနအကြီးအကဲ၊ Gokhan Unlu (Dericiogullari ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း GM)၊ Gursel Othergengil (Isbir Synthetic Weaving GM GM)၊ Hüseyin Bekki (Beksan Nail Wire Machinery Machinery YKB), Hüseyin Finis (Tinaz Agri ve San) ။ ဆံÜနန် (Kalekim ဓာတုပစ္စည်းBalıkesir Md ။ ), SelçukSavaş (Savaşlar Installation YKB), Sinan Yırcalı (Balıkesir Electromechanical YKU), Yasin Çakar Ecosynergy ရွေးကောက်တင်မြှောက်။ UR ။ Gn ။ Md ။ ), YılmazSarıhan (Anar Metal YKB), Mehmet Ali Aşuk (San ။ Ve Tek ။ Provincial Directorate), GökhanSümer (Halkbank Balıkesir Division Co. ), Mesut Eray BALOSB ဌာနခွဲ။ Mardin ။ , Koray Urgun (Balıkesir2။ OSB Md ။ ) နှင့် Filiz Özkan (Turkishtime YKB) ။
Balikesir Aegean နှင့် Marmara ဒေသများ၏ဗဟိုမှာရှိတဲ့တူရကီရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသက်တာ၏ခေါငျး, အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီကအပြုသဘောဆောင်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်အရှင်မွို့၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာခဲ့သည်။ İstanbul - mirzmir အဝေးပြေးလမ်းနှင့် 1915 akkanakkale Bosphorus တံတားစီမံကိန်းများ၊ ၎င်းသည်Balıkesirကို Marmara စီးပွားဖြစ်မြို့၏အရေးကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်စေခဲ့သည်။
လက်ရှိ BALOSB ၏လက်ရှိ 570 ဟက်တာofရိယာ၏ 99 ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီများကအသုံးပြုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ထပ်တိုးချဲ့ထွင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုBalıkesir OIZ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် 570 ဟက်တာnewရိယာသစ်ကိုလက်ရှိ 776 ဟက်တာtoရိယာတွင်ထည့်ပြီးဒေသ၏အကျယ်ကို 1.346 ဟက်တာသို့တိုးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်; ပါ ၀ င်သောလူသစ်များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများဖြစ်သော Gebze, Kocaeli နှင့် Bursa တို့တွင်စက်မှုပြည့်နှက်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် BALOSB တွင်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောစက်မှုနယ်မြေများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ OIZ တွင်စုစုပေါင်းအလုပ်ခန့်အပ်မှုမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေ 30 အထိတိုးလာလိမ့်မည်။ Balıkesir OIZ ၏ချဲ့ထွင်မှုသည် Marmara နှင့် Aegean ဒေသရှိစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဤဒေသရှိလုပ်သားအင်အားအပေါ်သက်ရောက်လိမ့်မည်။
Balıkesir OIZ ပါ ၀ င်သူသည်သင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ခြားနားမှုကိုသင်ခံစားရစေသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 162,5 MVA switchgear စက်ရုံနှင့်မပြတ်မတောက်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော BALOSB သည်၎င်း၏သင်တန်းသားများကို 3.300 m3 / day capacity စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်စက်ရုံနှင့်အတူ ဆက်လက်၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ စက်ရုံအသစ်များတိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားသောနေ့တွင် 10.000 m3 စွမ်းရည်ရှိသောသန့်စင်စက်ရုံအသစ်ကိုစက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။
စက်ရုံများ၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဒေသတွင်းတွင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုနှင့်နည်းပညာသင်ကြားရေးဌာနတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံ ၅ ခုနှင့်စာသင်ခန်း ၅ ခန်းပါ ၀ င်သောကြောင့်စင်တာသည် OIZ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ Anatolian အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏အလုပ်ရုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စင်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ လူမှုရေးတာ ၀ န်များအရတည်ထောင်ထားသောကျောင်းသားစွမ်းရည်ရှိသော 75 နေ့စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာသည် OIZ တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများ၏ကလေးများကို ဦး စားပေးအဖြစ်လက်ခံသည်။
အနာဂတ်သို့ BALOSB သယ်ဆောင်ရန် 10 parameter သည်
အစည်းအဝေးတွင်အောက်ပါ 10 parameter သည် Balyskesir OIZ ကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေများနှင့်သူတို့၏အလားအလာကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်ဒေသတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်မှုနှင့်သဘောတူခဲ့သည်။
1 ။ Balıkesirliစက်မှုလုပ်ငန်းသည်Bandırmaဆိပ်ကမ်းကိုစောင့်နေသည်
Balıkesirစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည် iazmir ရှိAliağaဆိပ်ကမ်းကိုလည်းကောင်း၊ Istanbul ရှိAmbarlıဆိပ်ကမ်းကိုလည်းကောင်းတင်ပို့သည်။ ဤသည်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အချိန်ဖြုန်းတီးဆိုလိုသည်။ Bandırmaဆိပ်ကမ်းသည်လက်ရှိတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသော်လည်းကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်သောဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ပါကဒေသတွင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်အားဖြည့်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်Bandırmaဆိပ်ကမ်းသည်areaရိယာနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
2 ။ ပြည်သူ့တက္ကသိုလ်စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ပြည်သူ့တက္ကသိုလ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသေချာစေရန်ပထမ ဦး စွာပါတီအားလုံးအကြားခေတ်မီစက်မှုယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ရမည်။ ထို့နောက်လူတိုင်းလက်ကိုကျောက်တုံးအောက်တွင်ထားသင့်သည်။ ပါတီများအားလုံးအတူတကွ စုစည်း၍ ဤယန္တရားများကိုအချိန်မရွေးလည်ပတ်သင့်သည်။ အချို့သောဖွဲ့စည်းမှုများသည်မူဘောင်အတွင်းမှအခါအားလျော်စွာအတူတကွလာတတ်သည်၊ သို့သော်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင်လုံလောက်သောစွမ်းအင်နှင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
3 ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ
မြေယာစျေးနှုန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ တူးဖော်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကုန်ကျစရိတ်များ၊ မြူနီစီပယ်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် OIZs ရှိကုမ္ပဏီများအထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်သည်။ အများပိုင်ဘဏ်များဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောချေးငွေများကိုထုတ်ချေးနိုင်ပါကစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်ပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်မည့်အစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ကသူ၏အရင်းအနှီးကိုနည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုမည့်ဖြေရှင်းချက်များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
4 ။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝန်ထမ်းများ၏ပြနာ
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ ၀ င်ရောက်လာခြင်းသည်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ကြီးမားသောစွမ်းအင်ပြproblemနာကဲ့သို့ကြီးမားသောပြRနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအထက်တန်းကျောင်းများကို OIZs တွင်ထားရှိရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်း။ ပြင်ဆင်ရန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်ဤကျောင်းများ၏နာယကဖြစ်လာရန်လမ်းခင်းရန်လိုအပ်သည်။ BALOSB သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
5 ။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပေါင်းစည်းမှုပြီးစီးခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်
Osmangazi တံတားနှင့် Izmir အဝေးပြေးလမ်းဖြင့်Balıkesirသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပေါင်းစည်းမှုသေးပြည့်စုံသည်မဟုတ်။ ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သော Logistic Village သည်သူမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုမပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်Balıkesir၏တည်နေရာသည်အလွန်အားကောင်းသောအသွင်အပြင်များရှိသည်။ Marmara နှင့် Aegean ဒေသများ၏ဆုံမှတ်ဖြစ်သောBalıkesirသည်ဤအဓိပ္ပာယ်တွင်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသော်လည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကိုလျှင်မြန်စွာပြီးစီးရန်လိုအပ်သည်။
6 ။ ထောက်ပံ့ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမလုံလောက်
Balıkesirစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းခွဲများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကြုံတွေ့နေရသည်။ BALOSB ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းခွဲများကုမ္ပဏီများမှလုံလောက်သောစုဆောင်းမှုနှင့်အရည်အသွေးကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်သည်သူ၏လိုအပ်ချက်အများစုကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲဝန်ဆောင်မှုနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ကဲ့သို့သောမြို့များမှပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းစသည်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးရသည်။ ပြည်နယ်တစ်လွှားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းခွဲများအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရန်အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည်။
7 ။ ပို့ကုန်စျေးကွက်အသစ်များလိုအပ်သည်
အမေရိကန်နှင့်တရုတ်အကြားကနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ, United States ကိုတူရကီများအတွက်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးတရုတ်ထဲမှထွက်ပစ္စည်းများအပေါ်အပိုအခွန်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ Balıkesirliစက်မှုလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်သည်အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့လှည့်သင့်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် ၀ င်ငွေတိုးလာမှုနှင့်အတူလိုအပ်ချက်များတိုးပွားလာနေသည့်အရေးကြီးသောနိုင်ငံများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ BALOSB တွင်စျေးကွက်အသစ်များအတွက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်သည်။
8 ။ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ
စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးစိတ်ပျက်နေကြရသောပြcostsနာဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုခံနိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတူရကီစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုးတို့ကို၏အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးဆောင်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်အလွန်ခက်ခဲသောကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကာလ၌ပို့ကုန်၏အရေးပါမှုကိုအလွန်ရှင်းပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်တင်ပို့သူအားအားနည်းစေသောဤပြproblemနာသည်ယခုကျော်လွှားရန်လိုအပ်သည်။
9 ။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုရှင်းလင်းသင့်သည်
R & D လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဗျူရိုကရေစီဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပြင်ဥပဒေပြုရေးသည်လည်းအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးကုမ္ပဏီများသည်ပြည်နယ်၏ဝေါဟာရများကိုနားမလည်နိုင်ကြပါ။ R & D လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီများသည်မလုံလောက်သောကြောင့်အတိုင်ပင်ခံများကိုငှားရမ်းရသည်။ ဥပဒေပြpl္ဌာန်းခြင်းကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအားကောင်းစေသည်။
10 ။ အိမ်လိုအပ်သည်
အိမ်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ BALOSB နှင့်နီးစပ်သောအိမ်ရာလိုအပ်သည်၊ အထူးသဖြင့်အပြာကော်လာကိုနေရာချနိုင်သည်။ Gaziosmanpaşaဒေသကိုမြို့ပြအသွင်ပြောင်းမှုအဖြစ်သို့လုံးဝပြောင်းလဲရန်လိုပြီးTOKİကဲ့သို့သောအိမ်ရာစီမံကိန်းများအတွက်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် BALOSB ၏အပြာရောင်ကော်လာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရာတွင်အရေးပါသောအရှိန်အဟုန်ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ဒေသတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် Adana-Osmaniye မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအား 07 / 11 / 2016 ဒေသဖွံ့ဖြိုးရန် Adana-Osmaniye မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း - AK Party Osmaniye လက်ထောက်MücahitDurmuşoğlu, Anatolian Agency မှ Adana ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mehmet Kemal Firik သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူ၏အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းDurmuşoğluသည် Osmaniye အတွက်သူ၏အလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့သည်။
ဂျာမနီမှလာမယ့်အမျိုးသမီးများသာရထား 30 / 03 / 2016 ဂျာမနီသို့အမျိုးသမီးလှည်းသာရောက်ရှိသည်။ ဂျာမနီအရှေ့ပိုင်းရှိ Lepzig နှင့် Chemnitz အကြားခရီးသွားရထားများတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးရထားများအထူးရထားလမ်းများခွဲဝေပေးမည်ဟု Central Germany Regional Railways ကကြေငြာခဲ့သည်။
AnadoluJet အစ္စတန်ဘူလ် - Konya သာ£ 42 ထံမှ 01 / 05 / 2014 AnadoluJet အစ္စတန်ဘူလ် - Konya သာ£ 42 ထံမှ: ဒီတစ်နှစ်က၎င်း၏ခြောက်နှစ်တွင်ကျင်းပသည် AnadoluJet တူရကီအတူတကွချည်နှောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ AnadoluJet ခရီးသည်များသည် Istanbul Sabiha N သို့ခရီးသွားမည်
Bursa ရဲ့အဆုံးမဲ့ရထားစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ပြtheနာလား။ 30 / 10 / 2019 မှတ်မိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ Bursa ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ဥက္ကwho္ဌဖြစ်သူအလီအိုစမန်ဆန်မဇ်သည် 70 နှင့် 80 နှစ်များအတွင်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ BTSO ညီလာခံနှင့် ၀ န်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင်သူကအစီရင်ခံစာကိုညွှန်ပြပြီး“ စက်မှုလုပ်ငန်းကပိုပြီးများတယ်၊
Konya YHT ဘူတာဧရိယာလှုံ့ဆော်! ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာဒီတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ 16 / 10 / 2017 မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါဒေသသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီဒေသမှာသိပ်သည်းဆသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ယာဉ်အသွားအလာလည်းတိုးလာလိမ့်မည်။ Konya ၏ Selcuklu ခရိုင်သည်ခေတ်သစ် ina ဖြစ်သည်
ယာဉ်မောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Derince Çenesuyuလမ်းဆုံမှာတိုးလာ
စက်လှေကားများ Ankara Metro Stations တွင်အလုပ်မလုပ်
ဒေသတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် Adana-Osmaniye မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအား
AnadoluJet အစ္စတန်ဘူလ် - Konya သာ£ 42 ထံမှ
Konya YHT ဘူတာဧရိယာလှုံ့ဆော်! ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာဒီတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ
Balikesir ယာဉ်အသွားအလာရူအတွက် receiver
Balikesir အတွက်ယာဉ်အသွားအလာအတွက် standby အချိန် 30 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရန်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (335) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)